– मुन्ना सामसुल हक के मधेशीले आफुलाई राष्ट्रभक्त प्रमाणित गर्न भारतीयसँग लडेर सीमामा रगत नै बगाउनु पर्ने ? मलाई नेपाली नागरिकता दे भन्दा राष्ट्रप्रेमी नठहरीने ? देशको संविधानमा पूर्ण अधिकार
नेपालका लागि पूर्व अमेरिकी राजदूत स्कट ए डेलिसीले आफू अनुहारले नेपालीजस्तो नदेखिएपनि भित्रबाट भने नेपाली नै रहेको बताएका छन् । डेलिसी सन् २०१० देखि सन् २०१२ मा नेपालका लागि
आसपासमा नेपाली व्यवसायहरु रहेको न्युयोर्कको ज्याक्सनहाइटमा आगलागी (भिडियो सहित)
आसपासमा नेपाली व्यवसायहरु रहेको न्युयोर्कको ज्याक्सनहाइटमा रहेको एउटा भवनमा आगलागी भएको छ । ७४ स्ट्रीटमा सब वे नजिकै रहेको रेष्टुरेन्टको बेसमेन्टबाट आगलागी सुरु भएको जनाइएको छ । आगलागीबाट कुनै मानवीय